Choice Hotels dia manambara ny maha-izy azy ny marika vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Choice Hotels dia manambara ny maha-izy azy ny marika vaovao
Enga anie 5, 2015
ROCKVILLE, MD - Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), iray amin'ireo orinasan-trano fandraisam-bahiny malaza manerantany, dia nanolotra famantarana vaovao mivelatra manerana ny orinasa.
ROCKVILLE, MD - Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), iray amin'ireo orinasan-trano fandraisam-bahiny malaza manerantany, dia nanolotra famantarana vaovao mivelatra manerana ny orinasa. Ny fanombohana dia misy fijery sy fahatsapana vaovao ary fanentanana dokambarotra mirindra izay mandany fahitalavitra, radio, nomerika ary finday natao hampitombo ny fahatsiarovan-tsain'ny marika Choice sy hankalaza ny zavatra iainana andavanandro sy ny "fifandraisan'ny olona." Safidy nohavaozina ChoiceHotels.com dia manamora ny famandrihana ny famandrihan-toerana amin'ny hotely avy amin'ny fitaovana rehetra mahatonga ireo olona ireo hifandray bebe kokoa noho ny hatramin'izay. Ny vaovao vaovao dia hahetsika manerana ny fifandraisana amin'ny daholobe, ny media sosialy ary ny fiaraha-miasa stratejika hahatratra ireo vahiny mety hôtely amin'ny fantsona rehetra. Ireo ezaka mitambatra ireo dia taratry ny fametrahana toerana vaovao izay manamafy ny antony hisafidianan'ny olona ny Choice Hotels rehefa mandeha mifandray izy ireo.
Ny fametrahana ny marika vaovao sy ny maha izy azy vaovao dia miorina amin'ny lova napetraky ny Choice Hotels '75 taona ho vavahady fidirana amin'ny portfolio an'ny marika. Hita taratra ihany koa ny làlana vaovao sy ny fitomboan'ny orinasa satria mahatsapa ny fahafaha-mitrandraka amin'ireo mpandeha raharaham-barotra manerana ny portfolio, indrindra amin'ny sehatra ambony sy amin'ireo an'arivony taona. "Ny tanjonay dia ny hampivondrona ny olona ary hitsena ny vahiny rehetra, na aiza na aiza alehany," hoy i Robert McDowell, filoha lefitra zon'ny Marketing sy Distribution ao amin'ny Choice Hotels International. “Tianay ny hisongadina ary haneho amin'ny olona fa fantatray izay tena zava-dehibe amin'izy ireo. Ny fitsangatsanganana dia tsy momba ny toerana itodiana ihany. Ny momba ny fifandraisana amin'ireo olona ho hitanao eo. Mety tsy ny safidy mora indrindra ny misafidy ny hivoaka sy handeha, fa io no mety. ”
Miaraka amin'ny fanovana haingana ny teknolojia sy ny haino aman-jery sosialy mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha, mora - ary mora kokoa - ny mifandray amin'ireo olona saika mifanohitra amin'ny olona. Na izany aza, araka ny fanadihadiana natao vao haingana1, 85% ny olona manaiky ny fihaonana mivantana fa mahomby kokoa noho ny fifandraisana elektronika. Miaraka amin'ny efa ho 60% an'ny Millennial (18-34 taona) milaza fa ny ampahany tiany indrindra amin'ny dia dia ireo olona miaraka aminy na ho hitany2, ny famoronana Choice Hotels 'dia nanentana ny Amerikanina hivoaka sy hifandray manokana amin'ny namana sy fianakaviana, misambotra ireo fotoana mety tsy azony raha tsy izany.
"Ny portfolio-n'ny marika anay dia mandritry ny isa vidiny sy ny traikefan'ny vahiny izay mifanaraka amin'ny fotoana fijanonana rehetra eran'izao tontolo izao. Choice Privileges dia manolotra valisoa sy tombontsoa tadiavin'ny vahiny, ka na aiza na aiza toerana misy ny olonao, dia tsy lavitra mihitsy ny fananana Choice Hotels - ary ny olona ao amin'ny hotely anay dia vonona hatrany hampahatsiaro anao ho tsara, tiana ary hajaina, ” hoy i McDowell.
Ilay Clash's "Tokony hijanona ve aho sa handeha?" ny hira dia toy ny hira ho an'ny mozika manerana ny toerana fanaovana dokambarotra amin'ny fahitalavitra manasongadina tranga isan-karazany izay ahafahan'ny mpanjifa misafidy ny hijanona ao an-trano na hisafidy ny handeha any amin'ny fihaonan'ny lisea, hetsika ara-pianakaviana na fivorian'ny orinasa. Misafidy ny safidy tsara kokoa ny mpanjifa amin'ny farany - ny handeha hifandray amin'ny tena - ary rehefa manao izany izy ireo dia afaka mamandrika haingana sy mahomby kokoa amin'ny tranokala ChoiceHotels.com nohavaozina tanteraka.